Topnews:-Fadeexo: Wasiir Xiray gabadh Text Massege ku caaysay " Hi Daba lawareeg"
Topnews:-Fadeexo: Wasiir Xiray gabadh Text Message ku caaysay " Hi Daba lawareeg"
06 Febraury 2013 Waagacusub.com- Wasiirka Madaxtooyadda Somaliland Xersi Xaaji Cali ayaa Fadeexad kala huleelay Maxkamadda Magaaladda Hargeysa kadib markii uu ku dhici waayay inuu Maxkamada ka dhex sheego fariin qoraaleed ay ku caaysay gabadh yar oo lagu magacaabo Nadra Mohamed Jamac. Wasiir Xersi oo gabadha yar ee Nadra xiray ayaa Maxkamadda ka dalbaday in dacwada dib loogu dhigo kadib markuu afka marin waayay caayda uu gabadha yar ku dacweeyay inay telefoonkiisa gacanta ugu dirtay.
Warbaahinta Waagacusub oo todobaad dabagal ku heysay Caayda uu Wasiir Xersi ka harsan waayay ee gabadha yar ugu dirtay telefoonkiisa gacanta ayaa ugu dambeyn heshay fariintaas ,waxayna u qorneed sidaan"Daba lawareeg Wasiir noqdayoow waxaan kuugu yeedhi Saaxiibkaa Mr Razza"
Erayadaan Wasiir Xersi ku dhici waayay inuu afkiisa ka sheego ayaa maalmaha soo socda waxay qareenada Xersi ka dhex akhrin doonaan gudaha Maxkamadda taas oo Fadeexad weyn ku noqon doonta Wasiirka.
Dad badan ayaa isweydiinaya sababta Wasiirka uga seexan waayay fariin caaya oo Gabadh yar oo Reer Hargeysa ah u dirtay.
Dadka qaar waxay leeyihiin Mr Razza waa nin jira oo saaxiib ahaan jireen Wasiir Xersi laakiin lama ogga waxa ka dhaxeeya iyo sababta Wasiirka sas uga qaaday magaca ninkaas u dhashay Yementa.
Taariikhda waa markii ugu horeeysay ee gudaha Somalia gabadh ku nool loo xiro waxay Text Message caaya u dirtay Wasiir .
Gabadha fariinteeda hadii ay ahaan laheyd waa ku qarxinayaa ama waa ku dilayaa waa kiis dacwadeed culus hasse yeeshee Daba lawareeg ma dimbi gabadh yar loo xiraa ama loo dacweeyaa.
Caayda gubtay Wasiir Xersi waxaa laga yaabaa inay noqoto mid Mucaaradkiisa oo dhan ugu yeeri doonaan waxaana dhici karta in Text Messages badan looga diro Degaanada Khaatuma,PUntland ,Galmudug ,Muqdisho iyo qurbaha sidaas darteed waxaa leeys weydiin karaa Xersi muxuu sameen doonaa maadama uu dadka diraya Xiri karin sida gabadha yar.